နေ့လည်ဘက်မှာ ဘာလို့ တရေးတမောအိပ်စက်သင့်တာလဲ? – Trend.com.mm
နေ့လည်ဘက်မှာ ဘာလို့ တရေးတမောအိပ်စက်သင့်တာလဲ?
Posted on October 9, 2019 by Noel
ကြားရက်တွေမှာ မအိပ်စက်ဖြစ်ရင်တောင် ပိတ်ရက်တွေ၊အားလပ်ရက်တွေမှာ နေ့လည်ဘက်တရေးတမောအိပ်စက်ပေးသင့်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေနိုင်လို့ပါ။နေ့ခင်းဘက် တရေးအိပ်စက်တာဟာ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရစေလဲဆိုရင်…
အိပ်စက်တာက မှတ်ဥာဏ်တွေကိုပြန်ပြီးသိမ်းဆည်းပေးတဲ့အတွက်တရေးတမောအိပ်စက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဘယ်ဘာသာရပ်ကိုမဆိုသင်ကြားရင်သင်လွယ်၊မှတ်လွယ်ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်း တရေးတမောအိပ်စက်ပေးရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။
တရေးတမော နာရီဝက်လောက်အိပ်စက်ပေးတာက နိုးလာတဲ့အခါမှာ တခြားသူတွေထက်ပိုပြီးစိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာပါတယ်။ အားပြည့်သွားတဲ့အတွက်လန်းဆန်းတက်ကြွလာပြီးအလုပ်တွေပိုပြီးလုပ်နိုင်လာမှာပါ။
နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့အတွက် အကူအညီပေးနိုင်တဲ့အရာကတော့တရေးတမော အိပ်စက်ပေးဖို့ပါ။တစ်ပတ်ကို ၃ရက်လောက်နေ့လည်နေ့ခင်းအိပ်စက်ပေးတာက နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားတာကို၆၄ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ သိရပါတယ်။
တရေးတမောအိပ်စက်တာကစိတ်ကိုအနားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကို အတော်အတန်လျှော့ချပေးပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊စိတ်ဖိစီးမှုတွေခံစားရတဲ့အခါ တရေးတမောလောက်အိပ်စက်ပေးပြီးကောင်းကောင်း အနားယူသင့်ပါတယ်။ပိတ်ရက်မှာတောင်
အေးအေးဆေးဆေး အနားမယူနိုင်ဘူးဆိုရင် ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
နေ့လည်နေ့ခင်းမှာ အပြင်ထွက်လျှောက်လည်မယ်ဆိုရင် ငွေကြေးအကုန်အကျများနိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာပဲ တရေးတမောအိပ်စက်မယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ့်အပြင်ပိုက်ဆံလည်းစုမိသွားစေပါတယ်။အိမ်မှာစားမယ်ဆိုရင်တောင်အပြင်ကလောက် အကုန်အကျမများနိုင်ပါဘူး။